Inona izany, ahoana ny fomba namoronana azy ary inona no ampiasain'ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic? Fanavaozana maintso
Inona izany, ahoana ny fomba namoronana azy ary inona ny fampiasana herin'ny masoandro photovoltaic
Na dia mbola manjaka eto ambonin'ny planetantsika aza ireo solika fôsily ankehitriny, dia mihazo ny tsenan'ny firenena rehetra manerantany ny fanavaozana. Ny angovo azo havaozina dia ireo izay tsy mandoto ny tontolo iainana, izay tsy lany ary afaka mampiasa ny herin'ny singa eto an-tany sy ny manodidina, toy ny masoandro, rivotra, rano, sns. Miteraka herinaratra. Koa satria efa ho lany ny solika fôsily, ny hoavao dia ny ho avy.
Androany isika hiresaka lalina angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic. Ity angovo ity angamba no angovo be mpampiasa indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny sehatry ny havaozina. Te hahafantatra ny fomba fiasa sy ny fampiasana samihafa ananany ve ianao?
2 Ahoana ny famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic?
3 Singa sy fampisehoana
4 Fampiasana angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic
4.1 Rafitra Photovoltaic mifandraika amin'ny tsipika
4.2 Fampiasana hafa ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic
Alohan'ny hanombohanao mamaritra ny fampiasana sy ny fananana dia andao hazavaina hoe inona ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic ho an'ireo izay mbola tsy mahalala tsara. Ny angovo avy amin'ny masoandro dia ilay mahay mampiasa herin'ny masoandro avy amin'ny sombin-jiro hamokatra angovo izay avadika ho herinaratra avy eo. Madio tanteraka io loharano angovo io, ka tsy mandoto ny tontolo iainana na mamoaka entona manimba any amin'ny habakabaka. Ankoatr'izay dia manana tombony lehibe ny fanavaozana, izany hoe ny masoandro tsy ho reraka (na farafaharatsiny mandritra ny arivo tapitrisa taona).
Mba hanangonana ny herin'ny masoandro dia ampiasaina ny takela-by izay afaka misambotra fotona jiro avy amin'ny taratra masoandro ary manova azy ireo ho angovo.
Ahoana ny famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic?
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, mba hiteraka angovo photovoltaic dia ilaina ny maka ny sarin-jiro misy ny taratra masoandro ary mamadika azy ho herinaratra hampiasana azy. Azo tanterahina izany amin'ny ny fizotry ny fiovan'ny photovoltaic amin'ny alàlan'ny fampiasana tontonana amin'ny masoandro.
Ny tontolon'ny masoandro dia singa lehibe iray sela photovoltaic. Ity dia fitaovana semiconductor (vita amin'ny silicon, ohatra) izay tsy mila faritra mihetsika, na solika, na miteraka tabataba. Rehefa miharihary tsy tapaka amin'ny jiro ity sela fotovoltaika ity dia mandray ny angovo voarakitra ao amin'ireo fakàn'ny hazavana ary manampy amin'ny famokarana angovo, mametraka ireo elektrôna izay voafandriky ny saovo elektrika anatiny. Rehefa mitranga izany dia miteraka tondra-herinaratra mitohy ny elektrôna voaangona eo ambonin'ny sela fotovoltaika.
Satria ambany dia ambany ny tanjaky ny sela photovoltaic (0,6V fotsiny), apetraka amin'ny andiana herinaratra izy ireo ary avy eo afangaro amin'ny takelaka fitaratra eo anoloana ary fitaovana iray hafa izay mahazaka hamandoana eo anoloana. Aoriana (satria ny ankamaroany amin'ny fotoana hahitana azy eo amin'ny aloka).
Ny firaisan'ny andiana sela photovoltaic ary mifono ireo fitaovana voalaza ireo mamorona modely photovoltaic. Amin'ity ambaratonga ity dia efa azonao atao ny mividy ny vokatra hiova ho tontonana masoandro. Araka ny haitao sy ny karazana fampiasana azy, ity môdely ity dia manana velarana 0.1 m² (10 W) ka hatramin'ny 1 m² (100 W), sanda iraisan'ny indikativa ary mihena 12 volt, 24 V na 48 V arakaraka ny fampiharana.
Araka ny voalaza etsy ambony, amin'ny alàlan'ny dingam-panovana photovoltaic, ny angovo dia azo amin'ny voltages tena ambany ary amin'ny direct direct. Ity angovo ity dia tsy azo ampiasaina amin'ny trano, koa ilaina izany, a, a inverter hery manova azy ho lasa alternating ankehitriny.
Singa sy fampisehoana
Ireo fitaovana misy ny sela photovoltaic dia antsoina hoe panneaux solaires. Ireo takelaka ireo dia manana fampiasana maro. Izy ireo dia ampiasaina hiteraka angovo na amin'ny sehatra manokana, fianakaviana ary orinasa. Manodidina ny 7.000 Euros ny vidiny eny an-tsena. Ny tombony lehibe azo avy amin'ireo takelaka amin'ny masoandro ireo dia ny fametrahana azy ireo fa mora be ary tsy mila fikojakojana kely. Manana androm-piainana manodidina ny 25-30 taona izy ireo, ka tafarina tanteraka ny fampiasam-bola.
Ireo panneaux solaires ireo dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana mety. Izany hoe, any amin'ireo faritra izay mitodika amin'ny tara-masoandro amin'ny ora betsaka indrindra isan'andro. Amin'izany no ahafahantsika manararaotra indrindra ny herin'ny masoandro ary mamokatra herinaratra bebe kokoa.
Mila bateria ny tontonana amin'ny masoandro izay mitahiry ny angovo namboarina hampiasa azy io amin'ireo ora tsy misy tara-masoandro (toy ny amin'ny alina na amin'ny andro rahona na orana).
Momba ny fahombiazan'ny fametrahana masoandro photovoltaic, azo lazaina fa miankina tanteraka amin'ny orientation an'ny panneaux solaires, ny fametrahana ary ny faritra jeografika nametrahana azy. Arakaraka ny hazavan'ny masoandro any an-toerana no ahafahana mamokatra angovo bebe kokoa. Ny ankamaroan'ny fametrahana masoandro dia mamerina ny fampiasam-bolany afaka 8 taona. Raha 25 taona ny androm-piainan'ny tontolon'ny masoandro, dia mandoa vola izy ary mahazo tombony mihoatra ny ampy.
Fampiasana angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic
Rafitra Photovoltaic mifandraika amin'ny tsipika
Ny iray amin'ireo fampiasana lehibe ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic dia ny fametrahana sensor fotovoltaic sy inverter ankehitriny afaka manova ny angovo mitohy ateraky ny panneaux solaires ho lasa alternating ankehitriny hampidirana azy ao amin'ny takelaka elektrika.
Ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro lafo kokoa noho ny rafitry ny taranaka hafa izany. Na dia niova be aza io rehefa mandeha ny fotoana. Any amin'ny toerana sasany izay avo kokoa ny isan'ny tara-masoandro, ny vidin'ny angovo photovoltaic amin'ny masoandro no ambany indrindra. Ilaina ny fanananao tsipika fanampiana ara-bola sy ara-dalàna hanefana ny vidin'ny famokarana. Amin'ny faran'ny andro dia manampy ny planetantsika tsy ho voaloto isika ary hisoroka ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fandotoana.
Fampiasana hafa ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic
Fanazavana. Fampiasana angovo masoandro photovoltaic iray hafa ny jiro amin'ny fidirana amin'ny tanàna, faritra fialan-tsasatra ary fihaonan-dàlana. Izany dia mahatonga ny jiro ho mora kokoa.
Fambara. Ity karazana angovo ity dia ampiasaina amin'ny fitomboan'ny fahita matetika amin'ny famantarana amin'ny làlam-pifamoivoizana.
fifandraisan-davitra. Ity angovo ity dia ampiasaina amin'ny fotoana maro ho an'ny sehatry ny mpamerina herinaratra finday, radio sy fahita lavitra.
Herinaratra ambanivohitra. Miaraka amin'ny fanampian'ny rafitra afovoany, ireo tanàna sy tanàna kely miparitaka be dia afaka mankafy herinaratra azo havaozina.
Fambolena sy fiompiana. Ho an'ny fanjifana angovo any amin'ireny faritra ireny dia ampiasaina ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic. Manazava azy ireo, mitondra fiara paompy misy rano sy rano, ho an'ny ronono, sns.
Araka ny hitanao dia ampiasaina amin'ny faritra maro ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic izay mahatonga azy io hifaninana amin'ny tsena ary heverina ho ho avin'ny angovo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Inona izany, ahoana ny fomba namoronana azy ary inona ny fampiasana herin'ny masoandro photovoltaic